မန္တလေး မြို့ဝင်၊ မြို့ထွက်ဂိတ်များနှင့် မန္တလေးမြို့တွင်း သတ်မှတ်နေရာ ၁၈ နေရာတွင် တိုင်းဒေ?? - Yangon Media Group
မန္တလေးမြို့၌ ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်များနှင့် ပူးပေါင်းအဖွဲ့များ ညပိုင်းကင်းလှည့်စစ်ဆေးစဉ်။ (ဓာတ်ပုံ–AXE)
မန္တလေးမြို့တွင် မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးရဲ တပ်ဖွဲ့ဝင်များနှင့် ပူးပေါင်းအဖွဲ့များသည် မြို့ဝင်၊ မြို့ထွက်ဂိတ်များနှင့် မန္တလေးမြို့တွင်း သတ်မှတ်နေရာ ၁၈ နေရာတွင် အထူးပိတ်ဆို့ရှာ ဖွေစစ်ဆေးကြောင်းသိရသည်။ ”မြို့နေပြည်သူလူထု စိတ်ချမ်းမြေ့စွာနေထိုင်သွားလာနိုင်ဖို့ မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်များနဲ့ ပူးပေါင်းအဖွဲ့တွေက နေ့၊ ည အထူးပိတ်ဆို့ရှာဖွေစစ် ဆေးပေးနေပါတယ်။ မြို့ဝင်၊ မြို့ထွက်ဂိတ်တွေအပြင် မြို့တွင်းသတ် မှတ်နေရာတွေမှာလည်း စစ်ဆေးမှုတွေ ပြုလုပ်နေပါတယ်”ဟု မန္တလေးခရိုင် ရဲတပ်ဖွဲ့မှ တာဝန်ရှိသူတစ်ဦးက ပြောသည်။
မန္တလေးမြို့နယ်မြေအတွင်း မှုခင်းကျဆင်းရေး၊ မှုခင်းမဖြစ်ပွား စေရေးနှင့် ပြည်သူများ စိတ်ချမ်း မြေ့စွာနေထိုင်သွားလာနိုင်ရေးအတွက် စက်တင်ဘာ ၈ ရက်မှ စတင်၍ အထူးပိတ်ဆို့ရှာဖွေစစ်ဆေး ခြင်း၊ ဆိုင်ကယ်၊ ကားလှည့်ကင်း များကို ပြုလုပ်လျက်ရှိသည်။ မန္တလေးမြို့ မှုခင်းကျဆင်းရေး၊ ဒုစရိုက်မှုပပျောက်ရေးအတွက် မန္တလေးမြို့ပေါ် ရပ်ကွက်များရှိ လူငယ်များ စုစည်းပြီး ပြည်သူတပ် ဖွဲ့အင်အားစုအဖြစ် ဖွဲ့စည်းမှုများ များပြားလာရာ ယခုအခါ နေ့၊ ည လှည့် ကင်းဆောင်ရွက်ပေးနေသော အဖွဲ့ငါးဖွဲ့ကျော်ရှိလာပြီး အခြားရပ်ကွက်များတွင်လည်း ပြည်သူ့တပ်ဖွဲ့အင်အားစုများကို ဖွဲ့စည်းနိုင်ရန် တိုင်ပင်ဆွေးနွေးလျက်ရှိသည်။
မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး အစိုးရအဖွဲ့ လမ်းညွှန်မှုဖြင့် မန္တလေးမြို့တွင် ဒုစရိုက်ကျဆင်းရေးနှင့် မူးယစ်ဆေးဝါး တားဆီးနှိမ်နင်းရေး အထူးစီမံချက်အဖြစ် သိန်းငှက်စီမံချက်ကို ဇွန်လနောက်ဆုံးပတ်ကစပြီး ဆောင်ရွက်လျက်ရှိပြီး စက်တင်ဘာပထမပတ်ကစ၍ လုံခြုံရေးအင်အားတိုးချဲ့ကာ ပိတ်ဆို့ရှာဖွေစစ်ဆေးခြင်း၊ အရေးကြီး နေရာများတွင် ဖမ်းဆီးရေးအဖွဲ့များ ချထားပြီး ပိတ်ဆို့ဖမ်းဆီးခြင်းများ ဆောင်ရွက်လျက်ရှိကြောင်းသိရသည်။
ပျဉ်းမနား နှစ်ကျိပ်ရှစ်ဆူ နှစ် ၁ဝဝ ပြည့် သီတင်းကျွတ်ပွဲတော် အထိမ်းအမှတ် ပြိုင်ပွဲများသို့ ?
သမ္မတဖြစ်၊ မဖြစ်ထက် နိုင်ငံကိုအကျိုးပြုရန်ပိုအရေးကြီးဟု သူရဦးရွှေမန်းဆို
ရုပ်သံ အစီအစဉ်တစ်ခုတွင် တေလာဆွစ် တစ်ကျော့ပြန်သီဆိုဖျော်ဖြေ